विविध::News from Nepal
(धिताल चिरिच्याँट्ट) को नयाँ म्युजिक भिडियो बजारमा
रंगकर्मी कलाकार कृष्णप्रसाद धिताल (धिताल चिरिच्याँट्ट) ले आफनो तेस्रो गीतको म्युजिक भिडियो सुनमा सुती फलाम चोर्ने देश चिरिच्याँट्ट इन्टरटेन्मेन्ट नेपाल युटुबबाट सार्बजनिक गरेका छन् । विगत एक दशकदेखि हाँस्यब्यङग्य तथा नाटकमा सक्रिय धितालले राजनैतिक ब्यबस्था...
धनको वर्षा हुने यी ३ राशिको भाग्य हेर्नुस्:- मिथुन बाधा अवरोध हट्ने छन् । समयमा सुधार देखिन्छ । कुरामा भन्दा काममा जोड दिनुहोला। काममा स्थायीत्व दिनु पर्ने देखिन्छ । कार्य क्षमता,दक्षता बढ्नेछ । उद्योग धन्दा बन्द...
हरेक मानिसहरुको सोचाई विवाहपछि सबैको सम्बन्ध बलियो हुन्छ भन्ने नै हुन्छ । तर सबैको हकमा यो गलत हुन्छ । किनभने ज्योतिशी शास्त्रका अनुसार आफ्नो राशीले पनि विवाहपछिको सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ...
काठमाडौंको मौसममा एक्कासि परिवर्तन आएपछि विमान अवतरणमा समस्या आएको छ । अहिले चाइना इस्टर्न, तिब्बत एयरलाइन्स, एयर इन्डिया, यतिहाद एयरवेज र कतार एयरवेजका जहाजहरु अवतरण गर्न नसकेर काठमाडौंको आकाशमा फन्को लगाइरहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका...
कुन बार जन्मने मानिस कति धनि हुन्छ ?
जोतिष शास्त्र अनुसार कुन बार जन्मने मानिस कति धनि हुन्छ । आइतबारको दिन सूर्यको हो भने सोमवारको मुख्य ग्रह चन्द्र हो । मंगलवार मंगलको प्रभाव हुन्छ भने बुधवार बुधको । विहीबार वृहस्पति र शुक्रवार शुक्रको प्रभाव...
कुन अंगमा भएको कोठीको अर्थ के हुन्छ ? कानमा कोठी हुने ब्यक्ति अल्पायुका हुन्छन्
कुनै गोरो बर्णकी महिलाको अनुहारमा कालो कोठी छ भने त्यसले सुन्दरतामा निखार ल्याइदिन्छ । कालो कोठी अनुहारमा भएमा कसैको नजर नलाग्ने विश्वास समेत रहिआएको छ । शरीरमा यस्ता कोठी हुनुका विभिन्न कारण हुन्छन् । तर...
पती पत्नी बोल्दा पनि ख्याल गर्नुस है नत्र…
पति वा पत्नीबीच भएका जुनसुकै कुरा प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने भएको छ। तर, पति वा पत्नीले स्वीकृति दिएमा भने त्यसलाई प्रकट गर्न वा प्रस्तुत गर्न मिल्नेछ। मूल ऐनको दफा ४१ मा यस्तो प्रावधान राखिएको...
१० वर्षपछि अदभूत संयोग, अक्षय तृतीयामा के गर्ने ? के नगर्ने ?
वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन आज दान, होम, जप, तप गरी अक्षय तृतीया पर्व मनाइँदैछ । वैशाख शुक्ल तृतीयाको दिन गरिने दान, होम, जप, तपको फल अक्षय अर्थात् कहिल्यै नष्ट नहुने भएकाले यस दिनलाई अक्षय...
काठमाडौं । नेपालले पहिलोपटक प्रक्षेपण गरेको आफ्नै भूउपग्रह ‘नेपाली स्याटलाईट वान’ अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरीक्ष केन्द्रमा जोडिएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट) ले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो स्याटलाइट वान पृथ्वीको सतहबाट...
काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री विना मगरले नेपालको पानी कतारमा बेच्ने बताएपछि समकालिन बिषयमा खरो टिप्प्णी गर्दै आएका मुकुन्द घिमिरे उर्फ मुकुन्देले मन्त्री मगरको उक्त अभिव्यक्तीमा कडा टिप्पणी गरेका हुन् । आईतबार सामामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस...